Tsy fankasitrahana ny lanonana teny Iavoloha : nanao hetsika fivorian-dovia ny Wake up Madagascar | NewsMada
Tsy fankasitrahana ny lanonana teny Iavoloha : nanao hetsika fivorian-dovia ny Wake up Madagascar
“Aody ry mpitondra, ampiasao amin’ny mahasoa anay ny volanay. Aza lalaovinareo ny fiainanay…”, hoy ny santionan’ireo soratra nentin’ny olom-pirenena sy ny Wake up manoloana ny tsy fankasitrahan’izy ireo ny lanonana teny Iavoloha, omaly…
Hetsika tanaty filaminana. Fandaharan-dovia tsy misy na inona na inona no nentin’ireo olom-pirenena sy ny Wake up Madagasacar ho fanoherana ny fandaniana nandritra ny fifampiarahabana nahatratra ny taona vaovao 2016 teny amin’ny Lapam-panjakana eny Iavoloha. “Voky ianareo, noana izahay”, hoy hatrany ny soratra manodidina ny lovia. Nambaran’ireo olona nifanentana fa toy ny fandatsana ny Malagasy anatin’ny fahasahiranana tanteraka ny fanaovana lanonambe amin’izao vanim-potoana izao.
Nirantiranty manerana ny lalana teo akaikin’ny tsangambato eo Antaninarenina ny lovia marobe napetrak’izy ireo. Nilaza hatrany ny Wake up Madagascar fa tsy azo ekena ny toy izao ary tokony ho tonga saina amin’izao ny mpitondra fanjakana. Vola tokony hanampiana ny vahoaka sahirana nefa lanilany maina fotsiny, araka ny fanazavan’izy ireo hatrany. Hetsika fanairana ihany ity nataon’ny olom-pirenena sy ny Wake up Madagascar ity.
Tonga nanatevin-daharana teny Antaninarenina koa ireo olon-tsotra avy any Antsirabe.
Tao anatin’ny filaminana no nanaovan’izy ireo ny hetsika teny Antaninarenina, omaly. Na izany aza, nihaodihaody teny an-toerana ihany ireo mpitandro filaminana nandeha fiara 4×4.
Tsy vao izao fa efa nanao hetsika fanairana noho ny delestazy lavareny nandritra iny taon-dasa iny.